Qoraa Dahsoon – Kaasho Maanka
Qoraaga maqaalkan lama garanayo magiciisa ama ma jecla in la xuso.
Dib-u-sixidda afkaaraha diinta islaamka: laba daran mid dooro!
Mowduuca dib usixida afkaaraha diinta islaamku waa mid kamid ah doodadaha dhowrkii dabshid ee ina dhaafay ka daaran bulshada soomaaliyeed dhexdeeda iyo guud ahaanba dunida islaamka oo dhan. Waa arrin aad loogu baahan yahay. Mase fududa oo waa arrin caaiiqdo iyo diin la xariirta.
DABA-MACAWSAYN (Dabada oo macaws lagu gufeeyo)
Kufsiga beryahaan dumarka ku soo batay Gartii Cabdullahi Cismaan ha lagu xaliyo.Cabdulaahi Cismaan Kenadid (allaha u naxariisto) iyo saaxiibkiis oo safar ah una socda Keenya, bilowgii siddeed-tamaadkii ayaa meel u dhaxaysa xuduudda Somaliya iyo Kenya baabuur kula jabay.Waxay go'aansadeen inay dhulkaas lug uga gudbaan intay ka gaarayaan magaalo weyn oo ay baabuur ka helaan.Maalinba reero baadiye...
Ilaaha Maxammed waa Ilaah noocee ah?
Qaybta: Awood sare, Nabi Maxamed
Ilaaha Maxamad ina baray waa ilaah dabeecad qallafsan, xanaaq badan, dhaar badan, aar-goosiga jecel, murugooda, qoomamooda, farxa sidoo kalana aad u carooda sida bini’aadanka. Ilaaha Maxammed waa Ilaah aan aad u caqli badneyn oo dadkuu abuuray ayaa ka xanaajiya, dadkii uu ogaa in ay ka xanaajin doonaan ayuu hadana ka xanaaqayaa.
Noloshii Warmooge iyo la kulankii Eeebbe
Qaybta: Awood sare, Diinta Islaamka, Sheekooyin, Xulka
Waxaa mudo dhowr bilood ahi ay ka soo wareegtay burburkii dawladii dhexe. Warfaa iyo qoyskiisuna waxaa ay u qaxeen meel baadiye ah oo 50 km dhanka qorraxdhaca ka xigta magaaladii ay ku noolaayeen. Nolosha qoysku waxaa ay ku tiirsan tahay xayn adhi ah iyo beer yar oo xoogay qudaar ah ay ku beereen. Waa habeenimo Isniin ah, qoysku waxaa uu ku hareeraysan yahay dab ay ku shiteen aqalka hortiisa...
Mindida waqtigaa af-tira (1/2)
Qaybta: Aragtiyo, Falsafad, Sooyaal
Haweenka sida loo arkayey guud ahaan caalamka iyo darajada ay ku lahaayeen bulshooyinka iyo xuquuqda loo ogolaa waxay soo martey maraaxil badan oo kala duwan. Ummaduhu waxay abuuraan khuraafaddo fara-badan oo qaarna la diimeeyo marka danbe kuna haraan qalbiga dadka, kuwana uu socodka waqtiga tirtiro raadkooda. Dadku markay arkeen in hooyadu wax dhasho kaligeedna wax dhasho waxay u qaateen in...